फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - चुनाव मुर्दावाद !
चुनाव मुर्दावाद ! लक्ष्मण गाम्नागे
हामी विभिन्न साना राजनीतिक दलका डुहुरे कर्मचारी संगठनहरूले सिंहदरबारभित्र गरेको धर्ना, तालाबन्दी र नाराबाजीका सम्बन्धमा केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले रहरले यो आन्दोलन गरेको होइन । हाम्रो थातथलो, गरिखाने मेलो र खाइपाइ आएको अधिकार तथा सुविधा मात्र होइन, हाम्रा संगठनको घाँटी नै थिच्न खोजिएकाले बाध्य भएर निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नु परेको हो । हामी सीमान्तकृत संगठनहरूले सपनामा पनि जित्ने कल्पना नगरेको चुनावी भुंग्रोमा धकेलेर सरकार र ठूला भनाउँदा युनियनहरूले हामीलाई स्वाहा पार्न खोजेको भएर हामीले तिनीहरूको षड्यन्त्र र दादागिरीविरुद्ध आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि यो आन्दोलन गर्नुपरेको हो । चुनाव नामको फाँसीको डोरी हाम्रा घाँटीनेर हल्लिन थालेकाले विद्रोह गर्नुपरेको हो । अल्पसंख्यकहरूको अधिकार रक्षाका लागि लड्नु परेको हो ।
चुनाव नभएकाले नै हामी छौँ । हाम्रो अस्तित्व छ । हामीले पनि कुनै ठूला संगठनभन्दा कम योगदान गरेका छैनौँ, ट्रेड युनियन आन्दोलनमा । चुनाव नभएकैले हामीले पनि तिनीहरूले जत्तिकै आफ्ना अड्डाहरूमा दह्रो अड्डा जमाएका छौँ । अफिसका हाकिम भनाउँदाहरूलाई हाराबारा खेलाएका छौँ । सचिवरमन्त्रीहरूसँग कुममा कुम जोडेर ‘चियर्स’ गर्न पाएका छौँ । कर्मचारी प्रशासनलाई बस् भन्दा बस्ने, उठ् भन्दा उठ्ने बनाएका छौँ । सरकारको सरुवा नीतिलाई लोप्पा ख्वाएका छौँ । बढुवामा लोभ्याएर वा धम्क्याएर भए पनि हामीले आफ्ना मान्छेलाई उत्तीर्ण गराएका छौँ । कतिपय भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्नेहरूलाई सदासयपूर्वक सदस्यता दिएर उनीहरूको रक्षाकवच बनेका छौँ । हामीले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई यति सुविधासम्पन्न बनाएका छौँ, उनीहरूलाई हाजिर गरेबापत तलब, काम गरेबापत अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सम्पूर्ण अभ्यास हामीले अड्डाहरूमै गरेका छौँ । युनियनका नाममा हामी हरेक संगठनका सयौँ कर्मचारीले पूर्णकालीन बनेर कार्यालयको काम छाडेका छौँ । हामीले समयमा कार्यालय नगए पनि हुन्छ, हाजिर जुनसुकै बेला गरे पनि हुन्छ । हामीलाई कसैले कुनै प्रश्न उठाउने आँटै गर्दैन । हाम्रो राजनीतिक पहुँच देखेर हाकिमहरू नै हाम्रो चाकरीमा आउँछन् । हामीलाई रिझाउन धाउँछन् । सर्वसाधारण कर्मचारीका अगाडि सिंहजस्तो गर्जिने उनीहरू हाम्राअगाडि भिजेका स्यालजस्ता हुन्छन् । अधिवेशन, साधारणसभा, परिषद्, गोष्ठी, तालिम, भ्रमण अनेक नाममा ठूला युनियन जत्तिकै सरकारी खर्च र सुविधा लिएर बजाउन पाएका छौँ ।
चुनाव नभएकाले नै हामीले यी सबै पराक्रम गर्न सकेका हौँ । चुनाव भन्ने शब्दै सुन्दा हामीलाई भित्रैदेखि भाउन्न होला जस्तो हुन्छ । हामी चुनाव नहुँदा नै आनन्दित छौँ, सन्तुष्ट छौँ, अधिकार सम्पन्न छौँ । हामीले चुनाव मागेकै छैनौँ । नमागेको कुरा हामीलाई जबर्जस्ती लाद्न खोजिएकाले हामीले विरोध गरेका हौँ । ठूला संगठनहरूले चुनाव खोजेकै होइनन्, हाम्रो हैसियत उधिनेर हामीलाई सिध्याउन खोजेका हुन्, त्यसैले हामी चुनाव बहिष्कार गर्छौं । आफ्ना खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्ने चुनाव कुनै हालतमा हुन दिन्नौँ । वर्षौंदेखि खाइपाइ आएको सुविधा खोस्ने चुनावको हामी भण्डाफोर गर्छौं ।
– छँदाखाँदाको हाम्रो साम्राज्य ध्वस्त बनाउन खोज्ने ठूला युनियनहरूको दादागिरी बन्द गर !
– सम्पूर्ण डुहुरे युनियनहरू एक हौँ !
– चुनाव मुर्दावाद !
नेपाल, वैशाख १, २०७३